अर्को प्रेमी नाठो को हो त ? हेर्नुहोस लाउरेले किन यस्तो गरे ? – Complete Nepali News Portal
अर्को प्रेमी नाठो को हो त ? हेर्नुहोस लाउरेले किन यस्तो गरे ?
ति युवतीको श्रीमान अहिले पनि सिंगापुरमा छन् । दिउसो १२ वजे तिर युवतीले देह त्याग गरेको भनेर युवतीको घरवाट माइतीमा खबर आएको थियो । युवतीले झु ण्डि ए र देह त्याग गरेको भनेर जानकारी दिएका थिए । तर माइती त्यहाँ पुग्दा युवती झु ण्डि ए को अवस्थामा थिइनन् । परिवारका सदस्यले आफुहरुले रुखवाट युवतीलाई बाहिर निकालेको बताएका थिए । तर त्यो घटना हेर्दा शंकास्पद देखिएको भन्दै उनीहरुले घरपरिवारका सदस्यलाई छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् । माइतीले घटना छानविनका लागि युवतीका परिवारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।